Indostrian'ny fitrandrahana - Hengshui Jrain Frp Co., Ltd.
Asongadin'ny fanoherana hanoanana tsara, fanakanana ary famonoana afo aorian'ny fikarakarana manokana, vokatra plastika vita amin'ny plastika (frP) fiberglass (FRP) dia iray amin'ireo fitaovana malaza indrindra amin'ny indostrian'ny fitrandrahana.
Ny fitaovana FRP indrindra dia ahitana: tanki fitahirizana FRP, tanke goavam-be, mikosoka, flue, stack, electrolyzer, fantsona, mpitaona fitrandrahana, mpametaka pasipaoro, launder, regulator, trough, weir, slurry ary mifangaro tankina sns Ary ireo vokatra ireo dia amin'ny endriny isan-karazany. ary ny habe.
Raha ampitahaina amin'ny metaly, dia maivana kokoa ny FRP ary tsara kokoa amin'ny fanoherana ny korosi. Raha oharina amin'ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy sy ny vy, dia aleo lavitra kokoa ny FRP noho ny salan'isa fampiasa amin'ny vidiny tena tsara.
Noho izany ny fitaovam-pitrandrahana FRP dia mandray tsara ny indostrian'ny fitrandrahana maro toy ny fitrandrahana varahina, ny mine mine, ny orinasa balsama ary ny orinasa, sns.
Ny sarona karbona dia azo ampiasaina amin'ny fahaiza-mitrandrahana herinaratra ahafahana mameno ny fepetra takian'ny mpanjifa. Ireo fitaovana miaro amin'ny abrasion toa an'i Sic dia azo ampidirina ao anaty liner mba hanohitra ny fihenan-tena sy ny fanitsakitsahana. Ireo takona na kojakoana hafa dia azo ampidirina amin'ny tanjona serivisy.
Raha tsy ny tombony azo etsy ambony, dia hahazo tombony amin'ny antsipirihany ny vokatra vita amin'ny plastika fanamafisana plastika fanamafisana Fiberglass (FRP):
- Ny fanoherana ny korosi tena tsara: dia tsy hihetsika amin'ny asidra mahazatra, alkali, sira, vahaolana, setroka, sns.
- tanjaka manokana: tsara kokoa noho ny metaly mahazatra
- Famonoana afo sy fanoherana ny hafanana:
- fivoriambe mora
- vidiny ambany sy ny fiainam-panompoana lava
- Manindrona tsara: afaka mitazona ny asa dielektrika na dia ambany fatrany avo aza.
Ho an'ny fitaovana saro-bahana sasany, ny vokatra laminate roa dia azo ampiasaina, izany hoe ny thermoplastic toy ny PVC, CPVC, PVDF, PP no linerera sy fiberglass no rafitra, izay afaka mampifangaro ny linera thermoplastic tsara indrindra amin'ny fanoherana ny korosi sy ny herin'ny FRP.
Jrain, manana ny traikefa ananany ary kalitao avo lenta, dia nanome fitaovam-pitrandrahana maro isan-karazany ho an'ny orinasa mahay maneran-tany, toa ny mpiavy, mpitondra fivavahana, famahanana ny vatan-kazo, fonon-tanety, fonon-tany lehibe, tankina FRP ary tankina roa samy hafa laminate.
Famolavola grating, Mamatotra fanamafisana FRP, Fitaovana fanodinam-bokatra Fiberglass, Nohavaozina Fiberglass, hamolavola, Masinina fanamafisana GRP,